မိထ္ထီလာမြို့က ရိုင်းစိုင်းရမ်းကားမှုကြီး – Tu Maung Nyo | MoeMaKa Burmese News & Media
မိထ္ထီလာမြို့က ရိုင်းစိုင်းရမ်းကားမှုကြီး – Tu Maung Nyo
တူမောင်ညို။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၄ ရက်
မိထ္ထီလာမြို့ပေါ်တွင် မတ်လ ၂၀ ရက်နေ့မှ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဖြစ်ရပ်သည် လူမဆန်မှုကို ရိုင်းစိုင်းယုတ်မာမှု၊ ရက်စက်ရမ်း ကားမှု၊ အကြမ်းဖက်မိုက်မဲမှု သရဖူဆောင်းပေးလိုက်သည့် အကျည်းတန်အရုပ်ဆိုးမှုကြီးဖြစ်ပါသည်။
သိမ်မွေ့ပါသည်၊ ယဉ်ကျေးပါသည် ဟု ဆိုသောမြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် ရှက်ဖွယ်လိလိ အမည်းစက်ကြီးလည်းဖြစ်သည်။
“တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး”ဟု အာဘောင်အာရင်းသန်သန် ပြောဆိုလုပ်ကိုင်နေကြသူများကို လှောင်ပြောင် ပျက်ရယ်ပြုလိုက်သော ဖြစ်ရပ်လည်းဖြစ်ပါသည်။
ဤကဲ့သို့သော အပြုအမူရိုင်းနှင့်လုပ်ရပ်ဆိုးကို ယဉ်ကျေးသောလူမှန်သမျှ တစ်စိတ်တစ်ဝမ်းတည်းသော စိတ်ထားဖြင့်ပြတ်ပြတ် သားသားဆန့်ကျင်ရမည်၊ ကန့်ကွက်ရမည်။ တားဆီးကာကွယ်ကြရမည်။
(ဗိုလ်) ဦးသိန်းစိန်အစိုးရသည် ပြဿနာကြီးထွားကျယ်ပြန့်ပွားသွားပြီးမှ ဝင်ရောက်ကိုင်တွယ်လေ့ရှိသည်၊ မလောင်ခင်/ မဖြစ် ခင်က ကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်မည့် အစီအမံနှင့်စိတ်ကူးစိတ်သန်းပင်ရှိပုံမရချေ။ ဤသို့သောပြဿနာများကို အစိုးရကပင် တစ်ဖက် လှည့်နှင့် လုပ်ကြံဖန်တီးနေသည်ဟုယူဆသည်။
ရွှေအရောင်းအဝယ်ပြုကြရာမှဖြစ်ပွားခဲ့သော သာမန်အချင်းများမှုနှင့်လက်ရောက်မှုသည် အကွက်ချောင်း အကောက်ကြံလို သူများအတွက်“စနက်တံ” သဖွယ်ဖြစ်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ အချင်းများမှုနှင့် လက်ရောက်မှုဆိုသည်မှာ ရာဝတ်ဇဝတ်မှုခင်း အသေးအမွှားမျှ သာဖြစ်သည်။
ယင်းသို့သော အမှုသေးအမှုမွှားသည် မိထ္ထီလာမြို့ရှိပြည်သူများ၏ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်များကို ဆုံးရှုံးစေခဲ့ရပြီ၊ ပျက်စီးစေ ခဲ့ရပြီ။ ပို၍ဆိုးဝါးသည်မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာအတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ခဲ့ကြသော မိထ္ထီလာမြိုရှိ ပြည်သူများအကြားက ယုံကြည်မှုထိခိုက်ပျက် ပြားစေခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။
စနစ်တကျလေ့ကျင့်ထားသူ တုတ်ဓါးကိုင်လူရိုင်းအုပ်သည် ပြည်သူများ၏အသက်အိုးအိမ်နှင့်ယုံကြည်ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများကို နာရီပိုင်းမျှ အချိန်ကာလအတွင်း မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ကြသည်။ သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြသည်၊ မီးတင်ရှို့ခဲ့ကြသည်။
မိထ္ထီလာမြို့သည် စစ်တပ်မြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ရဲနှင့်စစ်တပ်အပါအဝင် အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းသည် ယင်းသို့ ဒုတ် ဓါးကိုင်လူရိုင်းအုပ်များ၏ သတ်ဖြတ်မှု၊လုယက်ဖျက်ဆီးမှု၊ မီးတင်ရှို့နေမှုများကိုအချိန်မီတားဆီးခြင်းမပြုခဲ့၊ လက်ပိုက်ကြည့်နေခဲ့ကြသည်။
ဤလုပ်ရပ်သည် စီမံချက်တစ်ရပ်အဖြစ် အကွက်ချလုပ်ဆောင်နေသာ အကြံကြီးမှုထဲမှ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဟုယူဆပါသည်။ သို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံအခြားသောအရပ်ဒေသများတွင်လည်း ယင်းကဲ့သောသော လုပ်ရပ်ဆိုးများ ဖြစ်ပွားပေါ်ပေါက်နိုင်ဖွယ်ရာ အလား အလာများရှိပါသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိ လူမျိုးပေါင်းစုံ၊ ဘာသာပေါင်းစုံပြည်သူများ သတိရှိကြဖို့လိုပါသည်။
ဘာသာရေး/လူမျိုးရေးဗန်းပြလှုံ့ဆော်ရန်စအကြမ်းဖက်ဖျက်ဆီးသူ လူရမ်းကားအုပ်များ၏ဘေးအန္တရာယ်မှ ထိရောက်စွာ ဟန့် တားကာကွယ်နိုင်ရန် လူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူများ၊ ဘာသာပေါင်းစုံပြည်သူများ တစ်စိတ်တစ်ဝမ်းတည်းသော စိတ်ဖြင့် ကျောချင်းကပ်ရင် ချင်းကပ်ကာ ဆောင်ရွက်ကြရပါလိမ့်မည်။
(ဗိုလ်) ဦးသိန်းစိန်အစိုးရကို အားကိုးယုံကြည်နေ၍မဖြစ်ပါ။ “ရခိုင်ပြည်နယ်ပဋိပက္ခ”တွင်လည်းကောင်း၊ ယခု“မိထ္ထီလာဖြစ်ရပ်” တွင်လည်းကောင်း (ဗိုလ်)ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ၏ လက်ပိုက်ကြည့်နေသော၊ တစ်ဖက်သို့ပင်းသော သဘောထားနှင့် အပြုအမူကို မြင်တွေ့ ခဲ့ကြရပြီဖြစ်သည်။ သို့အတွက် လူမျိုးစုံပြည်သူများ/ ဘာသာပေါင်းစုံပြည်သူများအချင်းချင်း ဥစ္စာရင်လို ဥစ္စာရင်ခဲကြရလိမ့်မည်။
ဘာသာတရားတိုင်းသည် အများသူငါအပေါ် မေတ္တာထားကြရန်၊ သည်းခံစိတ်မွေးမြူကြရန် အခြေခံအားဖြင့် ဟောပြောသင် ကြမြဲဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကလည်းဝေနေယျသတ္တဝါများအပေါ် မေတ္တာထားရန်၊ သည်းခံခြင်းတရားကို လက်ကိုင်ထားရန်၊ မေတ္တာ တရားနှင့်သည်းခံခြင်းတရားကို သူတော်ကောင်းတရားအဖြစ် ကျင့်ကြံအားထုတ်ရန် ဟောပြောမြဲပါသည်။
သို့သော်လည်း “အိမ်ရှင်ဘာသာ” ၊ “ဧည့်သည်ဘာသာ”အဖြစ် ခွဲခြားပြောဆိုနေမှုသည် ဘာသာရေး ရှော်ဗင်ဝါဒဆန်လွန်းပြီး၊ ပြည်သူများကို “ဘာသာရေးလူများစုနှင့် ဘာသာနေရေးလူနဲစု”အဖြစ် ခွဲခြားချိုးနှိမ်သည့်သဘော သက်ရောက်ပါသည်။ ဖြူဖြူမည်း မည်း ဝေနေယျများသတ္တဝါများ အပေါ် ရင်ဝယ်သားပမာ မေတ္တာထားရမည်ဟုရှေ့ဆောင်ညွန်ပြဆုံးမနေသူများအနေဖြင့်၊ သူတော်ကောင်းတရား လက်ကိုင်ထားသူများ အနေဖြင့်စကားနှင့်တရားကို လက်လွတ်စပယ်မပြောသင့် မဟောသင့်ပါ။
ဤသို့ပြောဆိုမှုသည် ဘာသာရေး အရေခြုံ၊ “ဘာသာရေးဖက်ဆစ်” များအတွက် လှုံ့ဆော် သွေးထိုးပေးသလိုဖြစ်နေပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် လူမျိုးပေါင်းစုံ/ဘာသာပေါင်းစုံပြည်သူများ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်လာခဲ့သော တိုင်းပြည်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသို့ လူမျိုးပေါင်းစုံ/ ဘာသာပေါင်းစုံ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်လာခဲ့ကြသည့် “ဟာမိုနီ” ကို ထိခိုက်မပျက်ပြားစေသင့်ပါ။
ယင်းသို့ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်လာခဲ့သည့် “ဟာမိုနီ”ကို ထိခိုက်ပျက်ပြားစေမည့် ရေးသားဟောပြောနေမှု မှန်သမျှကို တားမြစ် ဆန့်ကျင်ကြရမည်။ ယင်းသို့ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်လာခဲ့သည့် လူမျိုးပေါင်းစုံ၊ ဘာသာပေါင်းစုံ ပြည်သူများအကြား လူမျိုးရေးဘာသာရေး သွေးကွဲစေမှုသည် အုပ်စိုးသူများအကြိုက်ပင်ဖြစ်သည်။ စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီအရေးနှင့် စစ်မှန်သည့်ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးအတွက် အနှောင့်အယှက် အတားအဆီးဖြစ်ပါသည်။ လူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူများ အထူးသတိရှိကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
(Photo – DVB TV)
8 Responses to မိထ္ထီလာမြို့က ရိုင်းစိုင်းရမ်းကားမှုကြီး – Tu Maung Nyo
Witmone on March 24, 2013 at 7:44 pm
1952 သာယာဝတီမင်းလှမြို့ ဦးဘငြိမ်း (နောင် ပမညတဖြစ်လာသူ) နိုင်ငံရေးတရားပွဲလူထုကြီးကို စစ်ဗိုလ်အမိန့်ဖြင့် ရိုက်နှက်၊ပွဲဖျက်မှုကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ဖွဲ့ပြီး ဗိုလ်မှုးချုပ်ဟောင်းကျော်ဇော ဦးဆောင်သည်။ အဖြေမှာ .. စစ်တပ်ကရိုက်ပွဲလုပ်သည်. ဟုဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
Ref: ဗိုလ်မှုးချုပ်ဟောင်ကျော်ဇော ကိုယ်တိုင်ရေးအထုပ္ပတိ စတ္တုထတွဲ၊ စာမျက်နှာ(၇)
ယခု မိတ္တီလာ စစ်တပ်မြို့တွင် ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ စစ်တပ်က ဥပက္ခာပြုမှုကြောင့်လား။ မြို့နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့များက စစ်တပ်ကိုခေါ်ပိုင်ခွင့်မရှိ။ ရမ်းကားသောလူစုများမှာ ရိုက်နှက်၊လုပ်နိုင်သည့် ရဲများလိုအပ်နေပြီလား? ပထမနေ့က ရမ်းကားသောသူ (၂၀၀) ကို ရဲ (၇၀)ဦးက မနိုင်ပဲ မီးရှို့ခံလိုက်ရသည်..တဲ့။ ကျနော်သာ ရဲဆိုရင် တစ်ယောက်ထဲ ဒီပဲယင်းမီးလောင်ဗုံးတစ်လုံးနဲ့ပစ်ခွဲလိုက်ရင် ဒီရမ်းကားတဲ့လူ၂၀၀ ထွက်ပြေးသွားကြမှာ။ အခုတော့…ရမ်းကားသူများအုပ်စုကို မျက်ယိုဗုံးလဲပစ်ခွင့်မရ…။ ပစ်ခွဲပြန်လဲအခက် ..
paye pho on March 25, 2013 at 8:54 pm
ကျွန်တော်အထင်ကတော့၈၈မတိုင်မီကဘာသာရေးလူမျိုးရေးမိုင်တိုက်ခဲ့ပြီးလောင်းကျွမ်းပြာကျပြီး၈၈အရေခင်းပေါ်လာပါပြီအဲနောက်မှာလုံဝရှင်းမရအောင်ရှုပ်ထွေးပြီးတနှိင်ငံလုံးသွေးချောင်စီးခဲ့ရပါပြီနောက်ဆုံအဖြေရလပ်ကတော ပြည်သာပြည်သူများအသိဆုံပါဗျာ (အခုခါလဲ) (ဘာစက်လုပ်အုံးမာလဲ) ( ဘာစက်လုပ်အုံးမာလဲ ) (ဘာစက်လုပ်အုံးမာလဲ )
bango on March 25, 2013 at 6:14 pm
ပြောလိုက်တာ ရိုင်းသွားရင် တောင်းပန်ပါတယ်။မင်းမဲ့စရိုက်ပြုမူခြင်းဟာ မထိုက်တန်သေးသော ဒီမိုကရေစီလိုလားမှု့ဘဲဖြစ်တယ်။သူ့နေရာမှာ ငါဆိုရင်ကော??????? ခုလိုလူမဆန်သောသတ်ဖြတ်မှု့ခံစားခဲ့ရသူရဲ့ ကျန်ရစ်သူမိသားစုဝင်အနေနဲ့ဆိုရင်ကော?????? အိုးအိမ်မဲ့သွားရရှာတဲ့
့ခိုကိုးရာမဲ့ အမေအိုတစ်ယောက်ဟာ သင့်မိခင်ဖြစ်နေရင်ကော????? လူသားချင်းစာနာစိတ်ကင်းဝေးနေတဲ့ နိုင်ငံအဖြစ်ကော ရိုင်းစိုင်းတဲ့မြန်မာလူမျိုးပါရယ်လို့ ရင်ကော့အောင်ပွဲဆက်မခံနေကြဘို့ အားလုံးမှာတာဝန်ရှိနေပြီ။မိရိုးဖလာ ကိုးကွယ်ရာဘာသာဟာ ပြသနာမဟုတ်…သင့်မိဘကြောင့် သင်ကိုးကွယ်ရာဘာသာဖြစ်ကြတာများတယ်။မှားယွင်းသောအစွန်းရောက်ဘာသာဝင်မဖြစ်ဘို့ သင့်တာဝန် သင်ယူပါ
Maung Sai on March 25, 2013 at 10:19 pm
မျက်ရည်ယိုဗုံး ဆိုတာ လူရမ်းကားတွေအတွက်မဟုတ် အပြစ်မဲ့တဲ့ ဆန္ဒပြသူတွေအတွက်တာ
true talker. on March 25, 2013 at 11:08 pm
“Tu Mg Nyo, why,you are writing the truth?” Very good,true,correct article that shows the real colors of the Government.Till now,small population,small mosques,in the remote area,are still intentionally destruct,no action.So, how to trust this Government? So,what,the Government had mentioned that,they have announce the order to halt,the mob, is (NOT). It is also unnecessary to form Group of Investigation,which will take one year and cannot be find out the truth,like Rakhine crisis.
than than nu on March 25, 2013 at 11:29 pm
I strongly support your timely ironic statement as ‘ This incident has ridiculed to those who have been eloquently soliciting for LAW AND ORDER .
It is vividly clear that the government is lending blind eyes on these well organized unruly savage mobs.It is actually to easy understand this conflict asapremeditated and purported creation to divert public attention from Leppadaung crisis .
You have comment as ‘It is inappropriate to discriminate and distinguish religions in our country as host religion and guest religion, and to encourage religious chauvinism.’ I greatly regard your comment as inclusive and brazing one.
We haven’t heard so far the term RELIGION HARMONY uttered by anyone of political leader or activist..
It is so disappointing to see premier political figure shunning from religious and ethnic matters.If our society keep letting these perpetrators and their masterminds at large ,the world may see our country asasavage society.
I strongly support your call for awareness to people of Burma.
chit chit on March 26, 2013 at 7:26 am